2Sa 15 | Shona | STEP | Zvino shure kwaizvozvo Abhusaromu akazvigadzirira ngoro namabhiza navarume vana makumi mashanu kuti vamhanye pamberi pake.
baba vake Dhavhidhi
1 Zvino shure kwaizvozvo Abhusaromu akazvigadzirira ngoro namabhiza navarume vana makumi mashanu kuti vamhanye pamberi pake.
2Abhusaromu waimuka mangwanani, akandomira parutivi rwenzira pasuo; zvino kana kuchinge kuno munhu wakanga ouya kuna mambo kuzotambirwa mhosva yake, Abhusaromu ndokumudana, akati, "Uri weguta ripiko?" Kana akati, "Muranda wenyu unobva kuno rumwe rwamarudzi aIsiraeri," 3Abhusaromu waiti kwaari, "Tarira, mashoko ako akanaka, akarurama hawo, asi hakuna munhu wakatumwa namambo kuzokunzwa." 4Uye Abhusaromu akatiwo, "Dai ini ndichiitwa mutongi panyika, kuti ani nani anenge ane mhaka kana shoko auye kwandiri, ini ndimururamisire." 5Zvino kana ani nani akaswedera kuzopfugama pamberi pake, iye waitambanudza ruoko rwake, achimubata, achimutsvoda. 6Zvino Abhusaromu waiita nomutowo uyu navaIsiraeri vose vaiuya kuna mambo kuzotambirwa mhosva dzavo; naizvozvo Abhusaromu akanyengera moyo yavanhu vaIsiraeri kuti imude.
7Zvino makore mana akati apfuura, Abhusaromu akati kuna mambo, "Nditenderei henyu ndiende Hebhuroni, ndindoripira kupika kwangu kwandakapikira Jehovha. 8Nokuti muranda wenyu wakapika mhiko ndichigere Geshuri paSiria, ndikati, `Zvirokwazvo, kana Jehovha akandidzosera Jerusaremu, ndichanamata Jehovha.' "
9Mambo akati, "Chienda hako norugare." Naizvozvo akasimuka, akaenda Hebhuroni. 10Asi Abhusaromu wakatuma vashori pakati pamarudzi ose aIsiraeri, akati, "Kana mukanzwa kurira kwehwamanda, ipapo muti, `Abhusaromu ndimambo paHebhuroni.' "
11Zvino Abhusaromu akaperekedzwa navarume vana mazana maviri veJerusaremu, vakanga vakokwa; ivo vakaenda havo vakafara vasingazivi chinhu.
12Abhusaromu akatuma munhu kundodana Ahitoferi muGironi, gurukota raDhavhidhi, paguta rake Giro, panguva yakanga achibayira zvibayiro. Kurangana uku kukava nesimba, nokuti vanhu vakaramba vachiwanda kuna Abhusaromu.
13Zvino nhume yakasvika kuna Dhavhidhi, ikati, "moyo yavarume vaIsiraeri yotevera Abhusaromu." 14Ipapo Dhavhidhi akati kuvaranda vake vose vakanga vanaye paJerusaremu, "Simukai, titize nokuti kana tikasadaro, hapana mumwe wedu ungapukunyuka kuna Abhusaromu; kurumidzai tiende, arege kutibata pakarepo, atiitire zvakaipa, nokuparadza guta nomunondo unopinza."
15Varanda vamambo vakati kuna mambo, "Tarirai, varanda venyu vakamirira kuita zvose zvinodikanwa naishe wedu mambo." 16Mambo akabuda, vose veimba yake vakamutevera. Mambo akasiya vakadzi vane gumi, vaiva varongo, kuti vachengete imba. 17Mambo akabuda navanhu vose vakamutevera, vakandomira paBhetimaerihaki. 18Varanda vake vose vakapfuura kurutivi rwake, navaKereti vose, navaPereti vose, navaGiti vose, varume vana mazana matanhatu vakanga vamutevera vachibva Gati, vakatungamirira pamberi pamambo. 19Mambo akati kuna Itai muGiti, "Iwe unoendireiko nesu? Dzoka hako, ugare namambo, nokuti iwe uri mutorwa wakadzingwa; dzokera kunyika yako. 20Iwe uchangosvika zuro, zvino ini ndichakufambisa-fambisa seiko nesu, zvandisingazivi ini kwandinoenda? Dzoka hako, udzokewo nehama dzako; nenyasha nezvokwadi ngazvive newe."
21Itai akapindura mambo akati, "NaJehovha mupenyu zvirokwazvo, panondogara ishe wangu mambo, kana kufirapo kana kuraramirapo, ndipo pachava nemuranda wenyuwo."
22Dhavhidhi akati kuna Itai, "Chienda hako, uyambuke." Itai muGiti akayambuka, navanhu vake vose, navana vaduku vose vakanga vanaye. 23Vanhu venyika yose vakachema nenzwi guru, vanhu vose vakayambuka; naiye mambo amene akayambukawo rukova Kidhoroni, navanhu vose vakayambukawo vakaenda nenzira yokurenje.
24Zvino Zadhoki akasvikawo navaRevhi vose vanaye, vakatakura areka yesungano; vakagadzika areka yaMwari pasi, Abhiatari akakwirawo, kusvikira vanhu vose vapedza kubuda paguta. 25Ipapo mambo akati kuna Zadhoki, "Dzoserai areka yaMwari muguta; kana Jehovha akandinzwira nyasha, uchandidzosazve, akandiwonesa iyo nenzvimbo yayozve. 26Asi kana akati, `Handifari newe; tarirai, ndiri pano hangu, ngaandiitire sezvaanoda.' " 27Mambo akati kuna Zadhoki mupirisiti, "Iwe hauzi Muvoni here? Dzokera muguta norugare, iwe navanakomana vako vaviri vaunawo, mwanakomana wako Ahimaazi, naJonatani mwanakomana waAbhiatari. 28Tarira, ini ndichandomira pamazambuko erenje, kusvikira shoko rinobva kwauri rasvika, kundizivisa." 29Naizvozvo Zadhoki naAbhitari vakadzosera areka yaMwarizve Jerusaremu; ivo vakagarapo.
30Dhavhidhi akakwira nokumukwidza wegomo reMiorivhi, akafamba achingochema, akafukidza musoro wake, akafamba asine shangu, navanhu vose vakanga vanaye vakafukidza misoro yavo, vakakwira, vakangochema pakukwira kwavo. 31Zvino mumwe akaudza Dhavhidhi, akati, "Ahitoferi unoranganawo navamwe naAbhusaromu." Dhavhidhi akati, "Haiwa Jehovha, shandurai henyu mashoko aAhitoferi, ave mashoko oupenzi." 32Zvino Dhavhidhi wakati asvika kumusoro kwainamatwa Mwari, akaona Hushai muAriki osangana naye, nguvo dzake dzakabvarurwa nevhu pamusoro wake. 33Dhavhidhi akati kwaari, "Kana iwe ukapfuura neni, uchandiremedza; 34asi kana ukadzokera kuguta, ukandoti kuna Abhusaromu, `Ndichava muranda wenyu, mambo; sezvandaiva muranda wababa venyu kare, saizvozvo ndichava muranda wenyu zvino; ipapo ungandikundira mano aAhitoferi.' 35Zadhoki naAbhiatari vapirisiti, havazipo newe here? Naizvozvo zvose zvaunonzwa mumba mamambo, uudze Zadhoki naAbhiatari vapirisiti izvozvo. 36Tarira, vana vavanakomana vavo vaviripo, Ahimaazi mwanakomana waZadhoki, naJonatani mwanakomana waAbhiatari; zvino unditumire navo zvose zvauchanzwa." 37Naizvozvo Hushai, shamwari yaDhavhidhi, akaenda kuguta; naAbhusaromu akapinda Jerusaremu.